Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayo sida loo horumarin karo barashada xirfadda farsamada gacanta. – Wasaarada Waxbarashada , Hiddaha & Tacliinta Sare
Magaalada Muqdisho ayaa lagu qabtay kulan looga hadlayo sida loo horumarin karo barashada xirfadda farsamada gacanta.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Feysal Cumar Guuleed, xubno ka tirsan dowladda, aqoonyahanno, iyo madax ka tirsan hay’adda Niis ayaa ka qeyb galay kulankan.
Qaasim Gaabow Ducaale oo ah wakiilka hay’adda Niis ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in hadafka laga leeyahay kulankan uu yahay sidii looga shaqeyn lahaa in bulshada laga horumarinayo dhinacyada nolosha iyo wax soo saarka si isku filnaasho loo gaaro.
Maxamed Cadde Mukhtaar oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay ka shaqeyn doonaan sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyaradda Soomaaliyeed.
“Waxaan ku dadaali doonnaa sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa dhalinyaradda Soomaaliyeed ee wax baratay, si looga gudbo dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ee soo wajaha dhalinyarada” ayuu yiri Maxamed Cadde Mukhtaar.
Wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya Feysal Cumar Guuleed ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay ka go’an tahay sidii loo horumarin lahaa barashada farsamooyinka gacanta.
“Ka wasaarad ahaan waxaa naga go’an inaan horumarinno, waxbarashada bulshada, gaar ahaan, farsamooyinka gacanta, si fursada shaqo ay u helan dhalinyaradda” ayuu yiri wasiir ku xigeenka waxbarashada Feysal Cumar Guuleed.
Wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qorsheyneysa in dhamaadka sannadkan ay qabato shir weyne looga hadlayo siyaasadda guud ee barnaamijka farsamada gacanta.